Liverpool Oo Macasalaamaysay Sunderland Balse Ku Weyday Coutinho
HomeWararka MaantaLiverpool Oo Macasalaamaysay Sunderland Balse Ku Weyday Coutinho
26/11/2016 Abdiwahab Ahmed
Kooxda Liverpool ayaa sii kordhisay kulamada aan dhinaceeda dhulka la dhigin horyaalka Premier League kana dhigtay 11 ciyaarood kadib markii ay dhulka jiiday kooxda Sunderland – laakiin wajahaysa wakhti adag oo ay ku ciyaari doonto bilaa Philippe Coutinho kaas oo garoonka dhexdeeda bareele lagaga dhex qaaday.
Xiddiga reer Brazil ayaa kuraanta dhaawac ka soo gaadhay mar ay kubbada ku dagaalameen Didier Ndong dhamaadka qaybtii hore ee ciyaarta, markaas oo ay Liverpool ku guuldaraysatay inay ka faa’iidaysato kubbad haysasho 80% ah oo ay ku maamulaysay ciyaarta.
Sunderland marar dhawr ah oo aan sidaas u badnayn ayay labada qaybood ee ciyaarta mid kasta goolka kooxda ka soo horjeeda weeraro ku ekaysay laakiin umay suurto galin inay inay wax gool ah ku dhaliyaan.
Halka kooxda tabbobare Jurgen Klopp qaybtii dambe ay cadaadiska ka sii wadeen, waxaanu ahaa bedelkii Coutinho, Divock Origi, kii shabaqa ku xareeyey goolka furitaanku.
Milner ayaa goolka labaad rigoodhe ugu saxeexay.
Full Game Highlights: Seattle Seahawks vs Atlanta Falcons
Liverpool Oo Lagu Iibinayo Lacag Jaban Iyo Dacwad Ka Dhalatay